Radio Sudoorawaz 95 Mhz जनमैत्री काम भएका छन
सोमबार भदौ ११, २०७५
भागेश्वर डडेल्धुरा- बिद्यार्थी राजनिती बाट स्थानिय प्रतिनिधीको उमेदवार पछि भागेश्वर गाउपालिका प्रमुखमा निर्वाचित कौशिला कुमारी भट्ट भन्छिन आफु निर्वाचित भएको एक बर्षमा जनमैत्री काम भएका छन । गाउ वस्ति, वडा, स्तर बाट योजना छनौट भई आएकाले स्थानियहरुले नै माग गरे अनुसारका योजना छनौट गरी काम भए । तर जनप्रतिनिधीको पहिलो बर्ष भएकाले अध्ययन अनुसन्धानको राम्रो सिकाईका रुपमा पनि पहिलो बर्ष रह्यो ।
१) तपाई लगायत स्थानिय जनप्रतिनिधीले भागेश्वर गाउपालिकाको नेतृत्व गरेको एक बर्षमा के कति उपलब्धी भए ?
जम्मै काम सबै समस्या समाधान भईसक्यो भन्ने छैन । विकासका कुरा गर्ने हो भने सडक देखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य देखि सबै तर्फ केही काम भएका छन । जस्तो ल्याब, अल्ट्रासाउण्ड गाउपालिकामै सञ्चालन गरेका छौ । नो मोर होम डेलीभरीका कार्याक्रम सञ्चालन ग¥यौ, जसमा वान वेई एम्बुलेन्स फ्रि भन्ने लागु ग¥यौ । शिक्षा तर्फ कसरी स्तोउन्नती अथवा गुणस्तरिय प्रतिसपर्धात्मक हुन्छ भन्नेमा थियौ अहिले १० वटा बिद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा अध्ययन अध्यापन शुरु गरि सकेका छौ । १० लाखको छात्र बृत्ति कोष स्थापना गरेका छौ । जस अन्र्तग गरिब, दलित असहाय एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल पाँच जना लाई प्रत्येक बर्ष निःशुल्क प्राबिधिक शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुर्गमका गाउवस्ति लाई सडक सञ्जाल संग जोड्यौ अझै जोड्दै छौ । कृषि तर्फ माटो परिक्षण गरि सकेका छौ, फलफुल बगैचा स्थापना गरी सार्वजनिक बाझो रहेको जमिनमा निःशुल्क बोट बिरुवा उपलब्ध गरी बृक्षारोप गर्ने लगायतका थुप्रै कामहरु गरेका छौ ।
२) कस्ता–कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
गाउ घरमा स्थानियले धेरै बुझेर हो या नबुझेर हो । सडककै माग भई आउने भएकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखि अन्य योजना भन्दा १०–१२ लाख रकम बढी सडकमै हालि काम गरियो । यस संगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम भए । यसरी नि अघि बढेका छौ ।
३) कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच काम गर्दा केही असहज भएको छ ? के कस्ता कुराहरु बाझिन्छन ?
त्यो असहज भन्दा पनि हाम्रो गाउपालिकामा अझै पनि कर्मचारी अभाव रहेका छन । हुनु पर्ने कर्मचारी भएन्न । धेरै ठाँउमा सचिव छैन्न । सचिवको काम चलाउ भनेर अरु कसैलाई दिन पनि नमिल्ने । एक जना सचिवले दुई तिन वटा वडाहरुको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने लगायतका समस्या आए ।
केही केही कुराहरु मिल्दै नमिल्ने गरी कर्मचारी लाई हामिले भनेर पनि हुदैन । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीका बिचमा त्येती धेरै खटन पटन कतिपय ठाँउमा भनिएका हल्ला भए जस्ता मेरो कार्यालयमा देखिएन्न ।
४) भागेश्वर सरकारका एक वर्षमा गौरव गर्न लायक योजना के–के हुन् ?
मैले भनि सके नि प्रत्येक बर्ष पाँच जना लाई निःशुल्क प्राबिधिक शिक्षा, पाँच वटा बिद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा पढाई गर्ने लक्ष्य लिएका थियौ अहिले १० बिद्यालयमा अध्ययन अध्यापन भईरहेको छ । नो मोर होम डेलिभरी, वान वेई फ्रि एम्बुलेन्स, आमा र बच्चाको ज्यानै जोखिममा हुन्छ हाम्रो ग्रामिण वस्तिमा खोप लगाउन खोप केन्द्र सम्म बच्चा बोकेर आउदैन्न । चार वटा खोप केन्द्र स्थापना गरी स्वास्थ्य शन्देशहरु दिदै हामि आफै त्यसै ठाउमा बसि राखेका छौ ।
सडक बाटाहरु पनि बनेका छन अब के के लाई गौरबका बिषय भन्ने बुझ्नेले राम्रा कामहरुको मुल्यांकन गर्न सके गौरबकै योजना सम्पन्न भएको जस्तो लाग्छ ।
५) निर्वाचनताका समय अब सिंहदरबार गाउँगाउँमा आउँछ भनेर भोट माग्नुभयो । सिंहदरबार गाउमा आयो कि आएन ?
यस्तो हो । सिहंदरबार पुरै गाउमा आयो कि आएन हामिले नै स्पष्ट पार्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई । तर कुरो के हो भने पहिलेको तुलनामा गाउघरमा विकास भने पक्कै भएको छ है । पहिले बजेट पनि निकै कम हुन्थ्यो अहिले गाविसको तुलनामा कयौ गुना बढी बजेट आयो र गाउमा नै खर्च पनि भएको सबैलाई सर्वविवितै छ । हाम्रो गाउपालिकामा तपाई अनुगमन मुल्यांकनमा कहिलेकाही गयो भने त्यो हेरे हुन्छ । जे छ प्रष्ट नै देखिन्छ । हाम्रो कुल बजेट राम्रो काममा व्यवस्थापन भएको छ र सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसमा गाउपालिका वासी पनि सकरात्मक नै छन । जनप्रतिसनिधी आए पछि नराम्रो भयो भन्ने छैन ।
केन्द्रमा भएका अधिकार तल्लो निकाय वा गाउपालिका बाट नै प्रदान गरिनु सिहंदरबार हो । पहिले कुनै पनि काम गर्न सदरमुकाम डडेल्धुरा पुग्नु पर्ने थियो । अहिले बगरकोट वा वडामा नै भई राखेको छ । माथिको अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन हुन हो भएको छ । जनता लाई कसरी सर्वशुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्ने भन्ने नै हो भएको छ नि ।
५) स्थानीय सरकार सँग जनताका अपेक्षा धेरै छन्, भागेश्वर गाउपालिकाले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?
सबै जन चाहाना, समस्या पुर्ण रुपमा निराकण गर्न सक्छौ भन्ने होईन । युवा व्यरोजगारीका सवालमा नेपाल सरकारले गर्न सकेको छौन हामिले एकै पटक कसरी गर्ने ? गाउपालिकाको सम्भाव पनि भएन । तर कसरी युवा लाई उत्प्रेरणा दिन सकिन्छ । गाउमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु, ब्याप्त रहेको अज्ञनता कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणले अघि बढि रहेका छौ । एउटा सकरात्मक पक्ष अहिले नै नतिजा नआउने भएकाले केही समय पछि राम्रो नतिजा आउछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
अर्थशास्त्रको नियमा नै छ । सिमित साधनले असमिती आवश्यकता पुर्ती गर्न सकिदैन । अनि मानिस ईच्छा आकांक्षा कहिलै पुरा पनि हुदैन्न । सम्बोधन गर्ने सवालमा पि वान, पि टु, पि थ्रि भनेर बढी भन्दा बढी स्थानिय समुदाय लाभान्वित हुने, वास्तविक माग गरी योजना छनौट गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसै अनुसार माग सम्बोधन गरिएका छन ।
७) स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्दा के–कस्ता चुनौती रहे ?
सबै भन्दा ठुलो चुनौती हामि विकट ग्रामिण भेगका मान्छे । अधिकांस स्थानिय गरिब, अशिक्षित, पिछडिएका छन, पिडित छन, यसमा पनि गरिबि ठुलो चुनौतीका रुमा रह्यो । अनि सबै कुरा सहज पनि हुदैन्न । यसमा पनि आफु सम्हालिएर काम गर्न सक्नु प¥यो ।
८) एक वर्षमा तपाईले गर्न चाहेको काम तर गर्न नसकेका केही काम छन् की ?
त्यस्तो केही छैन । खासमा के भयो भने, अबका दिनमा केही भयो भने म भनौला । पहिलो बर्ष हामि पनि नँया, योजनामा परिपक्क नभएको अवस्था थियो । जे भए गरियो सबै महत्वपुर्ण नै थिए । हुन त काम गर्दै जाँदा पछि अलिकती यसो भए हुन्थ्यो भन्ने खोजिने भयो । खासै त्यस्तो छैन सबै ठिक ठाक भएको छ ।
९) तपाई एउटा किशोरी, महिला भएकै कारण काम गर्न केही कठिन त भएन् ?
एक दम । कठिन भनेको के भने । हाम्रो सुदुरपश्चिममा सबै भन्दा बढी कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा । यो म संग पनि सम्बन्धित छ । म एउटा महिला हु । यस लाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने अभियान छुई बर्ष २०७५ पनि मनाई रहेका छौ । तर यो छिट्टै समाज बाट हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुदुरपश्चिममा अरु कुनै पनि स्थानिय तहमा महिला प्रमुख नभएकाले सबैले मलाई यो अभियानमा जुट्न पनि भनेका छन । यो सबै भन्दा ठुलो चुनौती छ ।
अरु कुनै लक्ष्य उद्देश्यमा नपुगेको, महिला भएर काम गर्न नसकेको केही पनि छैन ।
१०) यसरी जनताको काम गर्न केले उर्जा दिएको छ तपाईलाई ?
खुसी कतिबेला लाग्छ भने मान्छे साँचिकै पिडित थिए त्यही बेला केही राहत महशुस गर्न मिल्छ भने उर्जा मिल्छ । गरेको काम राम्रौ भन्ने सुनिन्छ यो नै उत्प्रेरण हो । म अझै गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । उर्जा मिल्छ ।
हाम्रो रुपाल क्षेत्र भनेको सबै भन्दा विकट । त्यहा पुग्न पनि ८–९ घण्टा पैदल हिड्नु पर्ने । त्यहा बाट जोगबुढाको परशुराम धाम क्षेत्र यसलाई सडक सञ्जालले जोड्न सके अझै उर्जा मिल्थ्यो जस्तो लाग्छ । भागेश्वर गाउपालिकामा गुणस्तरिय शिक्षामा पहुच नभएका कारण आठ नौ कक्षा मै बिद्यालय छोड्ने, बालवालिका लाई राम्रो शिक्षा दिनु पर्छ भन्ने भावना अर्झै अभिभावकहरुमा जागरुक हुन सकेको छैन । बिचार भए पनि गरिबीका कारण पढाउन नसक्ने अवस्था पनि छ । अहिले हामिले स्वयम सेवक शिक्षक भनेर परामर्श बाट तलब दिने गरी २२ जना शिक्षको आवश्यकता सुचना निकाल्दै छौ । यस्ता नँया काम गर्न सक्यो भने । स्थानियले ठिक लाग्यो भन्दा उर्जा मिल्छ ।